Imboni Yezinsimbi Zokuhlola Izinto Eziphrintiwe - I-China Printed Matter Testing Abakhiqizi, Abahlinzeki
I-SP Series X-Rite Spectrophotometer
I-SP series X-Rite spectrophotometer isebenzisa ubuchwepheshe bakamuva nobunembe kakhulu bokulawula imibala namuhla.Ithuluzi lihlanganisa imisebenzi yokulinganisa imibala ehlukahlukene ngokusebenza kahle okuphezulu nokunemba okuphezulu, iqinisekisa ukuthi ufinyelela inani elifanelekile kunqubo yokuphrinta umbala wendawo.
Uchungechunge olusha lwe-X-Rite lwe-500 yesibonisi se-Chinese spectrodensitometer isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe benzwa ye-spectral ukuze inikeze i-spectrodensitometer ephathekayo enembayo nokunemba okuphezulu.
DRK118B Ephathekayo 20/60/85 Isicwebezelisi Meter
I-DRK118B iwuhlobo olusha lomhloli oluhlakaniphile olunembayo inkampani yethu elucwaninga futhi luthuthuke ngokuvumelana namazinga kazwelonke afanelekile futhi yamukela imiqondo yesimanje yokuklama imishini kanye nobuchwepheshe bokucubungula ikhompuyutha ukuze kuklanywe ngokucophelela futhi kunengqondo.
I-DRK118A I-Angle Engle Gloss Imitha
Imitha yesicwebezelisi yesibuko isetshenziswa kakhulu ukukala isicwebezelisi esingaphezulu sikapende, iphepha, ipulasitiki, ifenisha yokhuni, izitsha zobumba, imabula, uyinki, i-aluminium alloy kanye ne-aluminium oxide surface neminye imikhiqizo eyisicaba.
I-stroboscope ibizwa nangokuthi i-stroboscope noma i-tachometer.I-stroboscope ngokwayo ingakhipha ukukhanya okufushane nokuvamile.Ishubhu ledijithali libonisa inani lokubanyaza ngomzuzu ngesikhathi sangempela.Incane ngosayizi, ilula ngesisindo, ithambile ekukhanyeni, yinde empilweni yesibani, ilula futhi kulula ukuyisebenzisa.
DRK102 Ukushaja Okuphathekayo Stroboscope
I-DRK102 i-stroboscope ephathekayo ephinde ishajwe, umkhiqizi we-stroboscope ophathekayo, intengo ye-stroboscope ephathekayo ephathekayo, esetshenziswa: ukutholwa kwezinto ezihamba ngesivinini esikhulu, ukulunywa kwegiya kanye nokugudluka!